Ngokusho kwemithetho yamanje, zobulelesi kungase kungasheleli ngaso sonke alethwe isiphelo sako okunengqondo. Kwezinye izimo, ijaji, umshushisi angakhipha isinqumo ukwenqaba ukuqalisa. Yiqiniso, kungcono kuphela ukuthi uma kungenziwa wayeka uma kunezizathu sina salokhu.
Izizathu zokuchithwa kwesicelo lokusungula zobulelesi
imithetho yesimanje zibonisa ngokucacile labo izimo lapho kuyadingeka ukuze senqabele lokusungula zobulelesi noma ukuba angaqhubeki nokwenza uphenyo kakade seluqaliwe.
Icala lokuqala lobugebengu inqanyuliwe ezimweni lapho abukho ubufakazi lobugebengu. Ngokwesibonelo, okungazange kube khona ukubulala nokuzibulala, njll
Ngaphezu kwalokho, isizathu kuvalwe icala kungaba ukuntula of Corpus delicti kule noma kulowo mcimbi. Ngokwesibonelo, abanye sigameko senzeke ngempela, kodwa akuyona kuphula umthetho we Criminal Code.
Ukwenqaba owamisa zobulelesi Ungase ube nesizathu ezahlukene: kuba ngokuqondene kokuphela kwesikhathi komkhawulo icala. Uhlaka nesikhathi ubugebengu okuboniswe Criminal Code ngokucacile.
Futhi-ke, kunjalo ayikwazi ukuvulwa maqondana umuntu oshonile (lobugebengu engaba). Okukhishwayo kuphela amacala lapho kubalulekile ukuze ahlanze idumela oshonile.
Ngaphezu kwalokho, umthetho uye walungiselela nezinye izizathu ukusulwa kwecala maqondana kumuntu othize.
Okokuqala kuyafaneleka ukuthi kwakungamukeleki ukwenqaba ukuvula icala lobugebengu kuzolandelwa kwenzeka ukuthi ngokuhamba uphenyo kunqunywa ukuthi umuntu obekwe icala awuzange abathintekayo kulolu daba okwenzeka. Umuntu angeke alahlwe yicala ubugebengu efanayo kabili - kungaba ikhonze njengomPristi nsuku sokwenqaba.
Ukwenqaba ukuqalisa zobulelesi singenzeka ngenxa ushwele. Ngaphezu kwalokho, umthetho ayivumeli kushushiswa umuntu ogama yobudala namanje enganele ukuba baphathe umnyuziki umthwalo lobugebengu.
Ukwehluleka ungenza kulezo zimo, uma umuntu ewela ngemuva sokukhula kwengqondo futhi senze ngokusekelwe bethanda yomunye, ngaphandle kokunaka zonke yalokho okungase kulandele.
Uma emva uphenyo asikho isizathu sokuba icala lobugebengu engakaze etholakele, lo mseshi, umtjhutjhisi umphenyi inganquma ukuqedwa uphenyo.
Isikhalazo ngokumelene ukungavumi owamisa zobulelesi
Vakaza ukuthi icala lobugebengu liye ivaliwe, ungazama inselelo. Ezimweni ezinjalo, kudingeka ulandele nezimfuneko ezithile ezingokomthetho.
Okokuqala, kudingeka ufunde ngokucophelela idokhumenti obufakazela lesi sinqumo. Into esemqoka lapha - ukunquma imbangela ekunqanyulweni kwe zobulelesi. Uma ngokuhamba uphenyo abuthole yezinhlobo ubugebengu ke ngiyofaka isikhalo cishe lutho.
Ngezinye izikhathi, ukuze abe isisekelo inselele isinqumo, kudingeka uzijwayeze ngazo zonke izinto test. Njengokuvamile, kungabonwa kuphela emva kokuthola imvume. Ngakho kudingeka wenze isitatimende (ke kumelwe ahlangabezane nezimfuneko ezithile, ngakho-ke kungcono ukusebenzisa amasevisi we ummeli) futhi ulithumele obuzayo. Ungenza lokhu ngokusebenzisa amasevisi wanoma yiziphi eposini. Uma unquma ukuthumela isicelo sabo ngqo uhlangothi, kufanele Thenga e amakhophi amabili: eyodwa pass mseshi, kanti eyesibili wena. On ikhophi yakho umuntu wanikeza iphepha ukushiya isignesha nosuku.
Ngemva isicelo sakho sibuyekezwe, uzotshelwa usuku nendawo lapho ufuna ukuza ukuze uzijwayeze ngazo zonke izinto ezidingekayo. By the way, ukutadisha izibambiso kungenzeka wahlanganyela kanye nomunye umuntu, kodwa ukuthi isicelo kufanele asayine amandla ommeli. Uma izinto kunjalo zisenza sibe inselele ukwenqaba, kudingeka wenze isikhalazo esibhaliwe bese elithumela kubo inkantolo wesifunda.
Lapho kufika isikhathi isinqumo senkantolo, okuyinto noma avumela bhunkula isikhalazo. Yonke inqubo ye ekugcwaliseni isikhalazo, yebo, kungaba kwenziwe ngokuzimela. Kodwa kungcono ukusebenzisa amasevisi we ummeli, njengoba usizo olufanelekile kuyosisiza ukuba awagweme amaphutha futhi kusheshiswe umsebenzi.
I-Akhawunti ye-Chamber WaseRussia: umsebenzi, usihlalo, igunya
Indlela ukudala i-imeyili khulula esishintshashintshayo RU futhi COM
Akusikho okungena nalokho Tshala greenhouse? imifino Ihambisana futhi akuhambisani. Amagesi Abamba Ukushisa Emkhathini for ukhukhamba